Nahoana ny vehivavy tia shapewear be dia be? | Wanzhanxing Apparel
Akanjo miloko marevaka
an-trano > NEWS
Nahoana ny vehivavy tia shapewear be dia be?
Shapewear fihetsika manome fanohanana
Na dia ny akanjo no tena ampiasaina slimming ny vatana, shapewear dia manome ihany koa ny fanohanany ny kibo, tratra, ary ny faritra indray. Ny azo antoka ny atin'akanjo vehivavy dia hamokatra mpanamboatra azy amin'ny fomba isan-karazany toy ny Slim akanjo lava na bodysuits izay mitsangana ny eo ambanin'ny-bra mba hanosika ny tratrany, ka manohana ny Bra. Ireo karazana akanjo ihany koa ny manome fanohanana ny aina indray. Open bust sy ny fanohanana miverina manampy anao mba hitsangana na hipetraka ny mahitsy, ka manatsara ny fihetsika. Ny fihetsika tsara dia tsy mahasoa ny fahatokiana sy ny hatsaran-tarehy, fa manana tombontsoa ara-pahasalamana maro. Ny fihetsika tsara mahatonga anao ho afaka miaina tsara, Manatsara ra, ary manamafy ny hazondamosiko sy ny tonon-taolana.
Omeo Vehivavy manify ny Bika Aman 'endrika
Ny antony shapewear mampiasa ny ankamaroan'ny vehivavy dia ny hiseho manify. Ny toetra sy ny famolavolana ny tena shaper mamela izany mba hanafoanana ny tsy ilaina bulges avy amin'ny endriky ny vatanao rehefa hitafy ny akanjo. Tsy manao izany ny mbola minono ao amin'ny rehetra ny vongan ny matavy amin'ny vatana, ka nomeny ny akanjo ny fahafahana Asongadin'ireny iray tsara tarehy isa. Ny ankamaroan'ny olona hitanareo very lanja amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo ary miankina amin'ny fepetra shapewear mba hanome azy ireo miaraka amin'ny fahatokiana ny manao akanjo sasany. Saika olo-malaza rehetra mandeha ny karipetra mena fampiasana shapewear mba hijery tsara tarehy kokoa sy faran'izay betsaka ny hatoky tena.
Shapewear no aina sy Discrete
Ny atin'akanjo dia mora akanjo tsy ilaina ary discretely manafina bulges eo amin'ny vatana mba hanome anao tanteraka Slim fijery. Shapewear lehilahy manan-tsaina dia tanteraka rehefa manao izany ambany ny akanjo. Ny fitafiana manify lycra manana fitaovana izay mamela anao teo am-bodin'ny manao akanjo tery, zipo, pataloha jeans na mahia tsy misy nahatsikaritra. Inona koa? Shapewear Tena aina noho ny malama fitaovana. Koa izy ireo hiaro ny fe avy amin'ny fanilihana ny tsirairay sy mamorona mahazo aina rehefa mandeha.
Andilany avo tummy fanaraha-maso ny tapaky ny feny short
Lace hanjairana breathable miray volo panty
Cut avo fanaraha-maso ny fehin tummy famatrarana
Maternity tapaky ny feny kibo fanohanana boyshort
Vehivavy Shapewear Omeo ny fitafiana Wide Safidy
Ny vehivavy tia ny manandrana azy akanjo fomba samy hafa. Na izany aza, ny tena endrika sy tarehimarika mametra ny safidy ny akanjo. Amin'ny alalan'ny fampiasana miray volo shapewear, tsy mila miahiahy momba ny fomba nanaovana ny fitafiana mendrika na dia mijery anao. Corsets sy ny vatana shapers afaka hanao fahagagana mba hanampiana anao antonona ao tsara ny mafy na ny hariva akanjo ambony te-hitafy.
Araka ny hita, shapewear atin'akanjo dia manan-danja koa ny vehivavy na ny fitafiana. Tsy mamela ny vehivavy ho eo amin'ny fanaraha-maso ny safidy ny akanjo na inona na inona toe-javatra. Rehefa mividy shapewear, ho azo antoka ny mandinika ny haben'ny akanjo, ara-nofo, sy ny fikasany ho an'ny izany. Azonao atao ny mividy shapewear avy amin'ny fivarotana na ny eo an-toerana mba Lingerie avy amin'ny mpanamboatra itokisana.
Ny iray amin'ireo mpanamboatra shapewear misy mendri-pitokisana dia miray volo WZX Wholesale Shapewear Manufacturers. Izahay, fa handeha ho ambany kely indrindra-mba shapewear mpanamboatra, ary manondrana maro samihafa ny shapewear vokatra ny toerana manerana izao tontolo izao. Afaka hiatrehana ampahany amin'ny ambany be baiko sy manolotra azy eo ny vehivavy rehetra maneran-tany conveniently.
Orinasa ambony Shapewear Mpanamboatra Label Shapewear tsy miankina
Précédent Inona ny serivisy fandefasana fandefasana sy ny fomba hanombohana?
Ahoana no mifidy ny miray volo shapewear mpamatsy rehefa manapa-kevitra ny hanomboka ny raharaham-barotra? MANARAKA